SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 168 of 174 - https://themummichogblog.com
Kukho iindawo ezintathu nengxelo evakalayo: intshayelelo, umzimba kunye nesiphelo. Siqala nequmrhu ukufumana ezininzi iingongoma zethu eziphambili esinyanzelisayo ngaphandle kuqala. Oko kuya asikhokele ukwenza intshayelelo enamandla kakhulu kunye nesiphelo.
Nazi ezinye iindlela iintloko ukuzama:
Fumana zonke iingcinga entlokweni yakho Post-yayo, ukulisebenzisa ngaphandle kwi keyboard, okanye sebenzisa oobhontsi zakho smartphone-nantoni na yakho Nantso eyona ekhululekile kuwe.
Thetha Khawuleza unako uze ubhale ilizwi lakho, ngoko ukubhala ngayo.
Nyuka neembono ezininzi kangangoko unako, ngokukhawuleza kangangoko unako.
Musani ukugweba iingcamango zakho. ukurekhoda Kanye njengoko beza. Ukuba unexhala lokuba uza kuthetha izinto izidenge, usenokugqibela esithi nto konke konke.
Khawucinge xa ​​ingxoxo umntu ucinga ukuba off kwisiseko, kwaye kufuneka imizuzwana amathandathu ukuze akhusele isikhundla sakho. Record wena.
Qala naphi na. Akuyomfuneko ukuba uqale ekuqaleni ntetho yakho.
Ngoku izazinzulu zobuchopho siyazi ukuba iimbono ezintsha beze mathuba afana nala. I “Heke!” mzuzu nathi sizibonele sikhatshwa i “gamma spike” -oko flash ngesiquphe umsebenzi gamma-ngumtshangatshangiso ngapha kwentliziyi, iziko ubuchule ingqondo yakhe. Ezi spikes gamma kwenzeka ngequbuliso, ngokuqhelekileyo xa u “Masiye” le ngxaki kunye nje free-yamalena ngeenxa zonke kuyo.  Yiloo imisebenzi iintloko indlela ekhawulezileyo. Nazo zonke iinkcukacha enkulu ndikuhlanganisela wenza sele, ingqondo yakho sesifikile ukuba nokulungelelanisa uze ufumane izimvo zakho okungcono ngaphandle-kanye oko kufuneka ukuxhasa injongo yakho.
Ngokuba intshumayelo yakhe entsha, tad wakhetha ubhale iingcinga ngokukhawuleza kwi Post-it uphawula. Okuhle kule ndlela kukuba yena wayekwazi qela uwalungise amanqaku xa iintloko ndigqibile. Jonga amanqaku tad kwiphepha elilandelayo.
Ngoku umsebenzi tad yaba ukuba anike la macebo isakhiwo ethile.
Okokuqala, wazifaka izibonda kumaqela ubhalo wawisa phawu ukuze iqela ngalinye.
Wabe esehlela iingcamango kwiqela ngalinye kwi ukuze kwabonakala ubhalo kuye: uqale data, uthi yena indlela data, uze uchaze data (bona umyalelo wakhe wokugqibela kwiphepha elilandelayo).
E tad wokugqibela waba izimvo zakhe, yaye kwakuthabatha yena kuphela malunga nesiqingatha seyure ukwenza lo msebenzi. Nangona iinkcukacha yayinzima, le ntetho iya kuba elula: isuti yakhe entsha racing yaba ngokukhawuleza kunokuba nayiphi na isuti, ekwakuya kubonwa ukuba
ngokukhawuleza, kwaye ke sikuxelele kungani na ngokukhawuleza. Oku bonke abaphulaphuli bakhe ukuba bayeke nguquko zabo. Nantoni na ezinye ukungcolisa kuphela ubuchopho babo, niwagxobha igalelo data, kwaye kulibazise isigqibo.
Zama wena. Xoxani ngezimvo zakho uze iqela kubo. Phi na ukuba usibone unxulumano phakathi izimvo zakho? Dubula ngokuba akukho amaqela ngaphezu ezintathu ezingundoqo, ngoko amalungiselelo iimbono ukuze kwiqela ngalinye. La maqela aya kuba izihloko eziphambili intshumayelo yakho.
i Charm Three kaThixo
Kwakutheni ukuze tad eze namaqela amathathu izimvo? Kutheni ezine okanye ezintlanu okanye ezintandathu?
Ngokuba yena smart. Uyazi amandla “ezintathu.” Zengqondo baye bafumanisa ukuba, xa uzama ukweyisela umntu, amabango ezintathu olucengayo, zimbini badla ngokwaneleyo, kodwa zine abaninzi kakhulu. NgooNjingalwazi Suzanne B. Shu kunye Kurt A. uCarlson nithi, “amabango Okuninzi balunge de ibango yesine, ngelo xesha [abaphulaphuli] ukubona zonke amabango kunye kugxeka.” Abaphandi bathi oku i “umtsalane amathathu,” kwaye ndiyakrokra ukuba unento yokwenza kangakanani umntu avareji ingaphatha kwinkumbulo elifutshane elide. 
Kakade ke, ukuxoxa ezinkulu Bendisoloko ndisazi malunga -ngomtsalane abathathu; yiloo nto behlala khona iingcamango ezintathu, amanqaku aphambili amathathu, okanye okufunyanisiweyo ezintathu ukuxhasa ibango. Lincoln wathetha ‘urhulumente wabantu, ngenxa yabantu, nangenxa yabantu. ” The French zithetha ‘inkululeko, ukulingana, yaye abo bakwinkonzo. ” Caesar wathi, “Mna ndizele, ndabona, mna ndiloyisile.” (Isaziso asabavumela ngolulamo nje imizekelo emithathu.)
“Akukho namnye unako ngaphezu ukukhumbula ngaphezu amanqaku amathathu.”
Amabali, iingoma, kunye neziqhulo zizele ngabathathu ( “guys ezintathu ungena bar …”). Semvelo Diane Ackerman ibonisa kule ipatheni: “Sicela ilithanda ngeepateni ukuba obsessively eyakho wethu, ngokufuthi threesomes, ezifana kusasa, kwaba semini enkulu, nobusuku; oodade Macbeth abathathu ingumnqa; izilumko abathathu; nilungile, beka, hamba; a Sonata Nantso ifomu oluneenxalenye ezintathu; i genie nto enika iminqweno ezintathu; amancinci, aphakathi, kunye enkulu; ABC; Sipho kunye weebhere ezintathu; ihagu omncinane abathathu; kwaye nangokunjalo. kubonakala ezithathu ukuba indlela yethu yokuzikhethela. “
Khumbula, sathi intshumayelo yakho sinezigaba abathathu; isingeniso, umzimba kunye nesiphelo. Ngoko ke, ukuba iingongoma ezintathu ezibalulekileyo emzimbeni ukuxhasa injongo yakho. Ngoku ugqibe ntoni ukuze uwafake.
Kufuneka ninikele njani iingongoma zakho?
Siyazi ukuba abantu bakhumbula izinto zokuqala nezokugqibela zisiva. Baya Khumbulani ulwazi ngokuphindaphindiweyo. Lo mgaqo ilula: Yenza ingongoma yakho ezokuqala nezokugqibela-ukuphindaphindwa kuya kunceda abantu ukhumbule baze baqonde oko.
sonke siyazi ukuba imemori evuzayo, ukuba ukhumbule amasuntswana kuphela eziqwenga koko beva, nokuba omninzi oko sicinga sikhumbula into engalunganga. Zengqondo uthi: “Ukususela okuqonda kwinkumbulo kukho amathuba amaninzi ulwazi ukuze ufakwe kokungalunganga enkhowudwa”  -ukuze Ngamanye amazwi, abaphulaphuli nje akayi ilunge ngaphandle kokuba endinokuyeka amathuba babo abakuqondi.
Oko kuthetha bathi kuqala into ofuna abantu ukukhumbula-nokuphindaphinda ngayo yokugqibela. Oku kunika amanqaku iqhosha ugxininiso. Kufuneka kwakhona isantya kwaye uthethe ngokucacileyo xa beninikela iingongoma eziphambili. Ngokutsho unjingalwazi CUNY kunye nengcali kunxibelelwano yedijithali Cathy Davidson, “Xa uthethe imveliso kwi ekuqaleni zorhwebo kunye xa beninikela umgca punch ekupheleni, amagama wakho kakhulu ziyacotha namazwi akho ngenyameko e-ndela-ci enemifanekiso-kuthatyathelwe. “
Kufuneka uchaze ingongoma nganye eyintloko, iyaxhaswa, uze ushwankathele ngayo. Simema ukuba Triple S Formula.
Yeyiphi kwezi mizekelo mibini kulula ukuyiqonda?
“Le iiziphu kunye beentanda babekwa ekukhuliseni permeability factor ngu malunga 2 iilitha imitha kabini yesibini nganye nganye. Ukongezelela, sonke ke undersized kancinci ngenxa yokuba imilinganiselo amandla avelana ubungakanani suit kwaye wenze umahluko malunga-7 ekhulwini utsalo ashukimisayo, njengoko le isilayidi kubonisa. Xa undersizing sinako ukuphucula permeability yi iilitha ezi-2 ubuncinane kwaye mhlawumbi ngakumbi. Kodwa ke impumelelo real textured, eziba nemanyeneyo isakhiwo ngokrebe. Phantsi khulu ngekhompyutha kwi tonela nomoya isakhiwo kubonakala ukuba malunga 7 iilitha permeability ezongezelelweyo phezu ikhosi glide esiziimitha ezi-250. ”
“Le isuti yenzelwe ukuba malunga neelitha 11 akubonakali ngaphezu kwezinye iisuti ezivenkileni. Nantsi ke uyazifohloza ngayo phantsi:
“Siya ukufumana iilitha 7 ukusuka kuyilo yethu akwenza ngokusebenzisa textured, ngokrebe nezibotho-ndawonye, ​​sabonisa usebenzisa kwemikroskopu kwi itonela umoya simulating ikhosi glide esiziimitha ezi-250.
“Thina ukufumana iilitha ezi-2 ngaphezulu ngokuthi undersizing kancinci isuti, nayo leyo esika malunga-7 ekhulwini lokuqala utsalo ashukimisayo.
“Kwaye sifumana iilitha ezi-2 ngaphezulu imitha nganye ophindwe ngomzuzwana ngokuthi hlengisa iiziphu kunye ezivuzayo.
“Oko wongeza ukuya iilitha ezili-11 ngaphezulu permeability ngaphezu kwayo nayiphi na isuti.”
Yintoni na uphawula into eyahlukileyo phakathi iinguqulelo ezimbini?
Yeyiphi enye into eqondakalayo? Ngoba?
Yintoni injongo liba ukushwankathela?
Nangona iinkcukacha zobuciko kakhulu, inkoliso yethu ukulandela Umzekelo 2 ngcono kakhulu Umzekelo 1. iza up Ingongoma ephambili phambi ( “ufumana iilitha ezili-11 ngaphezulu emoyeni isuti yethu”); ngoko emva kokuba izinto ezintathu data axhasayo, kwisishwankathelo sivakalisi ubopha isaphetha ekwibhokisi.
immagini reali degli indumenti da notte Colori dis
Mio Ges sepolto per amor mioTi adoro riverentement